Inona no atao hoe fanompoana | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Inona ny fanompoam-pivavahana?
Ny fiankohofana dia ny valim-bavaka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra no vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'ny fanambarany ny tenany ho amin'ny zavatra noforoniny. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana, ny mpino dia miditra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra Ray amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy, alalàn'ny Fanahy Masina. Ny fiankohofana dia midika koa hoe laharam-pahamehana sy amim-pifaliana ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Miseho amin'ny toetra sy fihetsika toy ny: vavaka, fiderana, fankalazana, fahalalahan-tanana, famindrampo mavitrika, fibebahana (Jaona 4,23:1; 4,19 Jaona 2,5:11; Filipiana 1: 2,9-10; 5,18 Petera 20: 3,16-17; Efesiana 5,8: 11-12,1; Kolosiana 12,28: 13,15-16; Romana;,; Hebrio;).